Misoro yeNhau dzaNhasi Kubvumbi 1, 2022
Veruzhinji votambira nemufaro chirongwa chaparurwa nehurumende chekupida mumisha inogara veruzhinji ichipa zvitupa nemagwaro ekuzvarwa, asi vamwe vachiti ndizvo zvinofanirwa kugara zvichiitwa nehurumende.
Kanzura webato reCitizens Coalition for Change, CCC,
rinotungamirirwa naVaNelson Chamisa kwaMutare, Amai Monica Mukwada,
avo vakasungwa nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekutyora
mitemo yezvemafambisirwo esarudzo, vanobvisiswa mari yechibatiso kuti vakwanise kutongwa vachibva kumba kwavo.
Hondo pakati peUkraine neRussia iri kuenderera mberi munyika mbiri idzi mushure mekunge Ukraine yabhomba matangi epeturu muRussia kunyangwe hazvo pane nhaurirano dzerunyararo dziri kuitwa pakati penyika mbiri idzi pari zvino.
Vagari vakawanda mudunhu reZvimba kuMashonaland West vanoti havasi kufara nedanho rakatorwa nekanzuru yavo yekuda kuvabhadharisa mari kana vachida kuchaya zvitinha zvekuvakisa dzimba dzavo.
Veteveri vemutambo wekiriketi munyika vopihwa mukana wekuona fainari yemukombe weDomestic T20 pasina muripo wepagedhe wavanobvisa.
Muchirongwa che LiveTalk, nhasi manheru na8pm, tiri kuenderera mberi nekutarisa sarudzo dzema by-elections dzichangobva mukuitwa mune mamwe matunhu emunyika uye zviri kuitika kuUkraine iyo iri kurwiswa neRussia muhondo yakonzera kusagadzikana kwezvinhu munyaya dzezvehupfumi pasi rose.